ရန်ကုန်မြို့ပြလမ်းများ၊ ရင်ပြင်များ – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
June 6, 2019 နေ့
“ငါ့ညီမ . . .ကမ္ဘာကြီးဟာ အကျယ်ကြီးတဲ့” . . .။
စတီရီယိုခေတ်ဟောင်းအဆိုတော်ကြီး မင်းမင်းလတ် “ဟစ်”ခဲ့တဲ့သီချင်းစာသားပါ။
ရန်ကုန်မြို့ဟာ အကျယ်ကြီးလား . . .။ ကျဉ်းလားတော့ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်တော့ပါ။ ကားရပ်ဖို့နေရာမှာ ကားတွေ ပြွတ်သိပ်ကျပ်နေပါတယ်။ ၀င်ကြေးကတော့ ၃၀၀ ကျပ်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အရဲစွန့် ၀င်လာရတယ်။ တစ်စီးစီ . . . တစ်စီးစီ . . .တရွေ့ရွေ့. . .တရွေ့ရွေ့။ မကြာပါဘူး။ မုန့်ဆိုင်ရှေ့နားလေးမှာ နေရာလေးတစ်နေရာရတယ်။ ဆိုင်ကလေးကိုတော့ အားနာပါရဲ့။ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ အသာလေးရပ်လိုက်တယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ အလုပ်နားရက်လို့ ထင်ပါရဲ့။ ကားတွေလည်းများ၊ လူတွေလည်း သိပ်ပြီးများလှပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက လမ်းခရီးမှာပဲရှိသေးတာကိုး။ “ပါကင်” မှာပဲ ဟိုငေး ဒီငေး စောင့်နေမိတယ်။ ကောင်းကင်ဟာ ပြာလွင်နေတယ်။ လေညင်းက ခရီးလွန်နေတယ်။ နုပျိုဆဲ ရောင်စုံပန်းပွင့်တွေက လှပနေတယ်။ ကိုယ့်မှာတော့ . . .မသက်မသာ အိုက်စပ်လို့ . . .။
မကြာပါဘူး။ “ဟွန်ဒါဖစ်” ငွေရောင်ကားလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ တစ်ယောက်က ပုဆိုးနဲ့၊ တစ်ယောက်က အားကစားဘောင်းဘီတိုနဲ့ . . .။ ပုဆိုးနဲ့လူက ကန်ပေါင်မှာ လမ်းဆက်လျှောက်ကြရအောင်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ . . .လမ်းဆက်လျှောက်တယ်။ ကျွန်တော်က သန်းနိုင်ရဲ့ “လမ်းဆက်လျှောက်မယ်” . . .သီချင်းကို သတိမရဘဲ . . .(ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင်) ဆရာငြိမ်းကျော်ရဲ့ “မြောက်ပြန်လေတွင် တွင်သော ကမည်း” ကို သတိရနေမိသည်။
ကန်ပေါင်မှာ ဖူးပွင့်စ လူငယ်လူရွယ်တွေပဲ များတယ်။ တချို့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ တချို့က ဆွေမျိုးတွေနဲ့၊ တချို့က ချစ်သူစုံတွဲတွေနဲ့၊ တချို့က ဂစ်တာတီးလျက်၊ တချို့က သီချင်းဆိုလျက် ပွင့်လန်းနေကြတယ်။ ဝေဆာနေကြတယ်။ ပွဲတော်နေ့ရက်တွေလို ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားလှတယ်။ မရောက်တာကြာပြီမို့. . .အင်းလျားရဲ့ညနေခင်းဟာ ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းတော့ စိမ်းသယောင် ရှိတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းက ရုံးချိန်ပြင်ပသည် ကန်ပေါင်မှာ လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဘောင်းဘီအတိုနဲ့ မိတ်ဆွေက လမ်းလျှောက်ရင်း စကားပြောရင်း အမြင်မတော်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ကောက်တယ်။ အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်နေတယ်။ လူငယ်အချို့ဟာ အစားအစာစားပြီး အမှိုက်တွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပစ်နေဆဲ။ ပါးစပ်ကတော့ “စင်ကာပူလို ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်” . . .လို့ပြောနေလေရဲ့။ ကန်ရေပြင်ဟာ မလှုပ်မယှက်၊ စိမ်းညို့ညို့။
ကျွန်တော်ကတော့. . .အင်းလျားကန်ပေါင်နားက ဆောက်လုပ်ဆဲ အထပ်မြင့်နှစ်လုံးကို ငေးမောနေမိတယ်။ တစ်လုံးက အိုင်ဘီစီနားမှာ၊ နောက်တစ်လုံးက ရေကူးကန်နားမှာ . . .။ ကျွန်တော့ အမြင်ပြောရရင် အင်းလျားဝန်းကျင်မှာ အဆောက်အအုံတွေ ရှိခဲ့ရင်တောင် သစ်ပင်တောအုပ်ထဲမှာ ပြားပြား ၀ပ်ဝပ်လေး မထင်ရှားပဲ ရှိနေရင် အင်းလျားရဲ့အလှအပကို အစွန်းအထင်း မဖြစ်စေဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟိုး . . .ပျပျဝေးဝေး ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းဘက်မှာ ရေပြင်နဲ့တောအုပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆီဒိုနားဟိုတယ်၊ မြန်မာပလာဇာအထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ၊ ပါရမီဘက်က အထပ်မြင့်ကွန်ဒို (တည်ဆောက်ဆဲ) . . .။
“လူတွေဟာ သွားစရာနေရာသိပ်မရှိလို့ ဒီမှာစည်ကားနေတာဖြစ်မယ်ဗျ . . .”တဲ့။ ပုဆိုးနဲ့ အသားဖြူဖြူ ၀၀လူကပြောတယ်။ “ဟုတ်မယ်” . . .လို့ ကျွန်တော်က သဘောတူ ပြောဆိုလိုက်တယ်။ အချို့နေရာတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်မရဘဲ ၀င်ကြေးပေးရတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ သွားစရာလာစရာ အပန်းဖြေစရာ နေရာလေးတွေ ကျုံ့သွားတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုနေဘုန်းလတ် ( သင်္ကန်းကျွန်းလွှတ်တော်အမတ် ကိုနေမျိုးကျော်) က ၁၆ .၆ .၂၀၁၆ နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အများပိုင်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး အဆိုတင်သွင်းရာ အနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာသတင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများပိုင်မြေ (Public Place) သို့မဟုတ် Public Space နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်နံတစ်လျားတွေးတောနေမိပါတယ်။ အင်းလျားရေပြင်ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်လဲ . . .။ အင်လျားကန်ပေါင်တစ်ဝိုက်က မြေကွက်ကိုရော ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ကန်တော်ကြီးရေပြင်ကိုရော . . .ကန်တော်ကြီးမြေပြင်ကိုရော . . .။ ဘယ်သူတွေ ပိုင်ဆိ်ုင်ပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မြေနေရာကြီးကိုရော . . .။ ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ . . .။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာကတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို People’s Square ၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ကို People’s Park လို့ ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Square လို့သုံးတာ၊ လေးထောင့်စပ်စပ်ကျနေတာလို့ သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးသားပွင့်လင်းတာ၊ မျှမျှတတဖြစ်ဖို့ပြောတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ကွက်လပ်ကြီးတွေကို Square လို့ပြောတာပါ။ အရင်က မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံကို “ဖိုက်ခ်ျစကွဲယား” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်မင်းကြီး “ဆာအဲလ်အ၀ပ်ဖိုက်ခ်ျ” ကို အစွဲပြုခေါ်တာပါ။
တကယ်တော့. . .စကွဲယား ဆိုတာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်လို ရင်ပြင်သက်သက်ကို ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မြို့လယ်ကောင်မှာ ရှိတဲ့မြေကွက်လပ်ကို ခေါ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဆောက်အုံတွေ ၀န်းရံထားတဲ့ မြေကွက်လပ် (Open Space) ပါ။ “စကွဲယား”ဟာ မြို့ထဲမှာ ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လမ်းနှစ်ခု(သို့) ယင်းထက်ပိုတဲ့ လမ်းဆုံမှာ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗြိတိန်မှာ ရှိတဲ့ Georgian Square ။ အချို့အလယ်မှာ ပန်းခြံရှိတတ်ပါတယ်။
Public Space လို့ခေါ်တဲ့ လူထုအတွက် အများပိုင်နေရာ (၃) မျိုး ခွဲခြားပြောလေ့ရှိပါတယ်။
(၁) ပြင်ပအများပိုင်နေရာ (External Public Space) မြို့ပြ့့Urban Area မှာ Pyblic Square လမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ ဥယျာဉ်၊ ကားရပ်ရန် Parking Lot . . . စသည်။
ကျေးလက် Rural Area မှာ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း၊ တောတောင်၊ ရကန်၊ မြစ်၊ ချောင်း . . .စသည်။
(၂) အဆောက်အုံများတွင် အများပိုင်နေရာ (Internal Public Space)
စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်၊ မြို့နယ်ခန်းမ . . .စသည်။
ဒါ့အပြင် . . . မီးရထားဘူတာ၊ လေဆိပ်၊ သဘောင်္ဆိပ်၊ ဘတ်စ် ကားမှတ်တိုင် . . .စသည့်ပို့ဆောင်ရေး သဏ္ဍာန် (Transporation Facilities)
(၃) အဆောက်အအုံပြင်ပနှင့် အတွင်း အများအသုံးပြုနေသော နေရာများ (External & Internal quasi-public space)
ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော်လည်း အများပိုင်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသောနေရာများ၊ တက္ကသိုလ် ပရိဝုဏ်၊ အားကစားကွင်း ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကုန်တိုက်ကြီး။ Privatized public space လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
“မြို့ပြဟင်းလင်း” ပြောပြော၊ မြို့ပြ ရင်ပြင်ဆိုဆို (Urban Space) အကြောင်း ဆက်ပြောကြရအောင် . . .။
ပြင်ပဟင်းလင်း (out-door space) ကို Positive နဲ့ Negative Spaceဆိုပြီး အဖိုအမ ခွဲလို့ရပြန်တယ်တဲ့။ အဖိုဟင်းလင်းကို တိုင်းထွာလို့ ရတယ်တဲ့။ တိကျပြတ်သားတဲ့နယ်နိမိတ် (define boundary) ရှိတယ်တဲ့။ ပိတ်နေတဲ့သဘော ဖြစ်နိုင်သလို၊ အဆက်အစပ်သဘော (enclosed) လည်း ဖြစ်နိုင်သတဲ့။ လွတ်လွတ်ပြောရရင် ရေဖြည့်ထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့။ အမာ “hard” Urban Space လို့လည်း ပြောပါတယ်။ “အမဟင်းလင်း” ကတော့ ပုံသဏ္ဍာန် အတိအကျပြောဖို့ခက်ခဲပါသတဲ့ (shapeles) ၊ အပျော့(soft space) ပါ။ ဥယျာဉ်ပန်းခြံတွေရဲ့ဟင်းလင်းပြင်တွေပါ။
သည်တစ်ခုမှာတော့ အဖိုဟင်းလင်းပြင်ကို ဖန်တီးခြင်း (Creating Positive Space) တွေကို ဆက်ပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ positive urban space မှာ အကြီးအသေး ပုံသဏ္ဍာန် (size & shape) အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း အခြေခံနှစ်မျိုးပဲ ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။
လမ်းများနဲ့ ရင်ပြင်များ (Street & Square)ပါ။ Streets ဆိုတာ ခြုံငုံပြောတာပါ။ squares မှာလည်း plaza, circuse, pizza, place, court . . . စသဖြင့်။ လမ်းများဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား dynamic space ဖြစ်တယ်။ sense of movement ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ square ကတော့ ငြိမ်သက်ခြင်း stafic space ပါပဲ။
“လမ်းနဲ့ ရင်ပြင်”အတွဲကို ဖွဲ့စည်း စီမံတဲ့နေရာမှာ သမားရိုးကျနဲ့ သမားရိုးမဆန်ခြင်း (formal & informal) ဆိုပြီး “ကွန့်” ကြပါသေးတယ်။ formal space နည်းလမ်းတွေကတော့ စနစ်တကျ လေးထောင့်စပ်စပ်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး အဆောက်အအုံများနဲ့ ကာရံထားတဲ့သဘောပါ။ ကြမ်းခင်းစီမံမှု (floor space) လုပ်ထားမယ်။ ပရိဘောဂ (street furniture) ပါမယ်။ informal space နည်းလမ်းမှာတော့ အချိုးမညီအကွက်ချ (asymmetric layout) ကို အခြေခံပါတယ်။ ပိုပြီးပျော့ပျောင်းတဲ့ relaxed chatracter ဖန်တီးပါတယ်။ ပြီးတော့. . . ဗိသုကာအာဝါသ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖန်တီးပေးတယ်။ (wide variety of surrounding architecture)
လမ်းများမှာ street cafes, street market . . .စသဖြင့်ကဖေးဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်လေးတွေ လှလှပပပသာသာယာယာ ဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်ကြီး ကနားကြီးတွေကို ထည်ထည်ဝါ၀ါ မသွားလိုသူတွေအတွက်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြို့ထဲသွားရင်းလာရင်း လမ်းလျှောက်ရင် ဈေးဝယ်လို့ ရပါမယ်။ မုန့်လေး အဆာပြေစားလို့ရမယ်။ အပူလေး အအေးလေး သောက်လို့ရပါမယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ ထီးလှလှလေးတွေ အုပ်မိုးလို့ပေါ့။ ( ယခု လမ်းဘေးဈေးသည် မိုးနေကျ ထီးမျိုးမဟုတ်ပါ။) အချို့နေရာမှာ ပန်းလေးတွေ ပွင့်၊ တချို့နေရာမှာ အပင်လေးတွေ စိမ်းမြ၊ တချို့နေရာမှာ ရောင်စုံလမ်းကလေးနဲ့၊ တချို့နေရာ ရုပ်တုလေးနဲ့၊ တချို့နေရာ ရေပန်းလေးနဲ့ သာသာယာယာ၊ လှလှပပ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – အနော်ရထာလမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား (၄၆ နှင့် ၄၈ ကြား) ဆူးလေတစ်ဝိုက်၊ ပန်းဆိုးတန်းအောက်လမ်း တစ်ဝိုက်။
ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးပါ။ အိပ်မက်ပါ။ ရန်ကုန်မြို့ဟောင်း down town (၆) မြို့နယ်ရဲ့Urban Space-Public Place တွေကို လက်ရှိ အနေအထားထက် အသုံးတည့်ဖို့၊ လှပဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ “အသစ်”တွေလည်း တည်ဆောက်တာ တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ မြို့ဟောင်းနေရာကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသင့်တဲ့ နေရာမှာမြှင့်တင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
ရန်ကုန်မြို့နယ်ဟာ ကားတွေရပ်စရာ နေရာမရှိသလို၊ လူတွေ လမ်းသွားစရာ တူတူတန်တန် ပလက်ဖောင်း ရှားသွားပါပြီ။ ဘိုကေကို ပြောင်အောင်ဖြီးလိမ်းပြီး အကျီ င်္လက်ရှည်နဲ့ ဘောင်းဘီအရှည်နဲ့၊ ခါးပတ်နဲ့၊ ရှူးဖိနပ်နဲ့ စတိုင်ကျကျ လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာ ဆူးလေဘုရားလမ်းမှာ . . . ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ . . .မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မိုးရွာရင် အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာ “ ထီးကလေးနဲ့ မနီ” လမ်းလျှောက်လို့လုံးဝ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
အားလုံးကို မဆိုလိုပါဘူး။ လမ်းတိုင်း၊ နေရာတိုင်းလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းအချို့ နေရာတချို့မှာ . . .
ဟိုနိုင်ငံနဲ့ တူဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
သည် နိုင်ငံနဲ့ဆင်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
“ Street & Square ” ချောချောမွေ့မွေ့လေးဖြစ်ရင် . . . ကျွန်တော်တို့လည်း ခါးပတ်နဲ့ ဖိနပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လို့ အဆင်ပြေလာမှာပါ။
“ငါ့ညီမ . . .ကမ်ဘာကွီးဟာ အကယျြကွီးတဲ့” . . .။
စတီရီယိုခတျေဟောငျးအဆိုတျောကွီး မငျးမငျးလတျ “ဟဈ”ခဲ့တဲ့သီခငျြးစာသားပါ။
ရနျကုနျမွို့ဟာ အကယျြကွီးလား . . .။ ကဉျြးလားတော့ကြှနျတျောလညျး မပွောတတျတော့ပါ။ ကားရပျဖို့နရောမှာ ကားတှေ ပွှတျသိပျကပျြနပေါတယျ။ ဝငျကွေးကတော့ ၃၀၀ ကပျြဖွတျလိုကျပါပွီ။ အရဲစှနျ့ ဝငျလာရတယျ။ တဈစီးစီ . . . တဈစီးစီ . . .တရှရှေ့ေ့. . .တရှရှေ့ေ့။ မကွာပါဘူး။ မုနျ့ဆိုငျရှနေ့ားလေးမှာ နရောလေးတဈနရောရတယျ။ ဆိုငျကလေးကိုတော့ အားနာပါရဲ့။ မတတျနိုငျပါဘူး။ အသာလေးရပျလိုကျတယျ။
တနင်ျဂနှနေေ့ အလုပျနားရကျလို့ ထငျပါရဲ့။ ကားတှလေညျးမြား၊ လူတှလေညျး သိပျပွီးမြားလှပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှကေ လမျးခရီးမှာပဲရှိသေးတာကိုး။ “ပါကငျ” မှာပဲ ဟိုငေး ဒီငေး စောငျ့နမေိတယျ။ ကောငျးကငျဟာ ပွာလှငျနတေယျ။ လညေငျးက ခရီးလှနျနတေယျ။ နုပြိုဆဲ ရောငျစုံပနျးပှငျ့တှကေ လှပနတေယျ။ ကိုယျ့မှာတော့ . . .မသကျမသာ အိုကျစပျလို့ . . .။
မကွာပါဘူး။ “ဟှနျဒါဖဈ” ငှရေောငျကားလေးနဲ့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ရောကျလာတယျ။ တဈယောကျက ပုဆိုးနဲ့၊ တဈယောကျက အားကစားဘောငျးဘီတိုနဲ့ . . .။ ပုဆိုးနဲ့လူက ကနျပေါငျမှာ လမျးဆကျလြှောကျကွရအောငျလို့ ပွောတယျ။ ဒါနဲ့ . . .လမျးဆကျလြှောကျတယျ။ ကြှနျတျောက သနျးနိုငျရဲ့ “လမျးဆကျလြှောကျမယျ” . . .သီခငျြးကို သတိမရဘဲ . . .(ဘာမဆိုငျ၊ ညာမဆိုငျ) ဆရာငွိမျးကြျောရဲ့ “မွောကျပွနျလတှေငျ တှငျသော ကမညျး” ကို သတိရနမေိသညျ။
ကနျပေါငျမှာ ဖူးပှငျ့စ လူငယျလူရှယျတှပေဲ မြားတယျ။ တခြို့က သူငယျခငျြးတှနေဲ့၊ တခြို့က ဆှမြေိုးတှနေဲ့၊ တခြို့က ခဈြသူစုံတှဲတှနေဲ့၊ တခြို့က ဂဈတာတီးလကျြ၊ တခြို့က သီခငျြးဆိုလကျြ ပှငျ့လနျးနကွေတယျ။ ဝဆောနကွေတယျ။ ပှဲတျောနရေ့ကျတှလေို ကွိတျကွိတျတိုးစညျကားလှတယျ။ မရောကျတာကွာပွီမို့. . .အငျးလြားရဲ့ညနခေငျးဟာ ကြှနျတျောနဲ့နညျးနညျးတော့ စိမျးသယောငျ ရှိတယျ။ မွနျမာဆနျဆနျ ဝတျထားတဲ့ သူငယျခငျြးက ရုံးခြိနျပွငျပသညျ ကနျပေါငျမှာ လမျးလြှောကျလေ့ ရှိတယျလို့ ဆိုတယျ။
ဘောငျးဘီအတိုနဲ့ မိတျဆှကေ လမျးလြှောကျရငျး စကားပွောရငျး အမွငျမတျောတဲ့ အမှိုကျတှကေို ကောကျတယျ။ အမှိုကျပုံးထဲ ထညျ့နတေယျ။ လူငယျအခြို့ဟာ အစားအစာစားပွီး အမှိုကျတှကေို စညျးမဲ့ကမျးမဲ့ ပဈနဆေဲ။ ပါးစပျကတော့ “စငျကာပူလို ဖွဈရငျကောငျးမယျ” . . .လို့ပွောနလေရေဲ့။ ကနျရပွေငျဟာ မလှုပျမယှကျ၊ စိမျးညို့ညို့။
ကြှနျတျောကတော့. . .အငျးလြားကနျပေါငျနားက ဆောကျလုပျဆဲ အထပျမွငျ့နှဈလုံးကို ငေးမောနမေိတယျ။ တဈလုံးက အိုငျဘီစီနားမှာ၊ နောကျတဈလုံးက ရကေူးကနျနားမှာ . . .။ ကြှနျတော့ အမွငျပွောရရငျ အငျးလြားဝနျးကငျြမှာ အဆောကျအအုံတှေ ရှိခဲ့ရငျတောငျ သဈပငျတောအုပျထဲမှာ ပွားပွား ဝပျဝပျလေး မထငျရှားပဲ ရှိနရေငျ အငျးလြားရဲ့အလှအပကို အစှနျးအထငျး မဖွဈစဘေူးလို့ ထငျပါတယျ။
ဟိုး . . .ပပြဝြေးဝေး ကမ်ဘာအေးဘုရား လမျးဘကျမှာ ရပွေငျနဲ့တောအုပျကို ကြျောဖွတျပွီး ဆီဒိုနားဟိုတယျ၊ မွနျမာပလာဇာအထပျမွငျ့ အဆောကျအအုံ၊ ပါရမီဘကျက အထပျမွငျ့ကှနျဒို (တညျဆောကျဆဲ) . . .။
“လူတှဟော သှားစရာနရောသိပျမရှိလို့ ဒီမှာစညျကားနတောဖွဈမယျဗြ . . .”တဲ့။ ပုဆိုးနဲ့ အသားဖွူဖွူ ၀၀လူကပွောတယျ။ “ဟုတျမယျ” . . .လို့ ကြှနျတျောက သဘောတူ ပွောဆိုလိုကျတယျ။ အခြို့နရောတှကေ လှတျလှတျလပျလပျ သှားလာခှငျ့မရဘဲ ဝငျကွေးပေးရတာလညျး ပါပါလိမျ့မယျ။ သှားစရာလာစရာ အပနျးဖွစေရာ နရောလေးတှေ ကြုံ့သှားတာလညျး ပါမယျထငျပါတယျ။
ကိုနဘေုနျးလတျ ( သင်ျကနျးကြှနျးလှတျတျောအမတျ ကိုနမြေိုးကြျော) က ၁၆ .၆ .၂၀၁၆ နေ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောမှာ ရနျကုနျမွို့ အမြားပိုငျမွမြေား ပွနျလညျရရှိရေး အဆိုတငျသှငျးရာ အနိုငျရရှိသှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မင်ျဂလာသတငျး ဖွဈပါတယျ။ အမြားပိုငျမွေ (Public Place) သို့မဟုတျ Public Space နဲ့ ပတျသကျပွီး တဈနံတဈလြားတှေးတောနမေိပါတယျ။ အငျးလြားရပွေငျကို ဘယျသူပိုငျဆိုငျလဲ . . .။ အငျလြားကနျပေါငျတဈဝိုကျက မွကှေကျကိုရော ဘယျသူပိုငျဆိုငျပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ကနျတျောကွီးရပွေငျကိုရော . . .ကနျတျောကွီးမွပွေငျကိုရော . . .။ ဘယျသူတှေ ပိုငျဆိုငျပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ပွညျသူ့ဥယြာဉျမွနေရောကွီးကိုရော . . .။ ဘယျသူပိုငျဆိုငျပါသလဲ . . .။ အင်ျဂလိပျလို ရေးထားတာကတော့ ပွညျသူ့ရငျပွငျကို People’s Square ၊ ပွညျသူ့ဥယြာဉျကို People’s Park လို့ ရေးသားလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီနရောမှာ Square လို့သုံးတာ၊ လေးထောငျ့စပျစပျကနြတောလို့ သုံးတာမဟုတျပါဘူး။ ရိုးသားပှငျ့လငျးတာ၊ မြှမြှတတဖွဈဖို့ပွောတာလညျး မဟုတျပါဘူး။ မွို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ကှကျလပျကွီးတှကေို Square လို့ပွောတာပါ။ အရငျက မဟာဗန်ဓုလပနျးခွံကို “ဖိုကျချြစကှဲယား” လို့ချေါပါတယျ။ ကျောမရှငျမငျးကွီး “ဆာအဲလျအဝပျဖိုကျချြ” ကို အစှဲပွုချေါတာပါ။
တကယျတော့. . .စကှဲယား ဆိုတာ ပွညျသူ့ရငျပွငျလို ရငျပွငျသကျသကျကို ချေါတာမဟုတျပါဘူး။ မွို့လယျကောငျမှာ ရှိတဲ့မွကှေကျလပျကို ချေါတာလညျး မဟုတျပါဘူး။ အဆောကျအုံတှေ ဝနျးရံထားတဲ့ မွကှေကျလပျ (Open Space) ပါ။ “စကှဲယား”ဟာ မွို့ထဲမှာ ရှိရမှာဖွဈပွီး အနညျးဆုံး လမျးနှဈခု(သို့) ယငျးထကျပိုတဲ့ လမျးဆုံမှာ ရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဗွိတိနျမှာ ရှိတဲ့ Georgian Square ။ အခြို့အလယျမှာ ပနျးခွံရှိတတျပါတယျ။
Public Space လို့ချေါတဲ့ လူထုအတှကျ အမြားပိုငျနရော (၃) မြိုး ခှဲခွားပွောလရှေိ့ပါတယျ။
(၁) ပွငျပအမြားပိုငျနရော (External Public Space) မွို့ပွ့Urban Area မှာ Pyblic Square လမျးမြား၊ အဝေးပွေးလမျး၊ ဥယြာဉျ၊ ကားရပျရနျ Parking Lot . . . စသညျ။
ကြေးလကျ Rural Area မှာ ပငျလယျကမျးရိုးတနျး၊ တောတောငျ၊ ရကနျ၊ မွဈ၊ ခြောငျး . . .စသညျ။
(၂) အဆောကျအုံမြားတှငျ အမြားပိုငျနရော (Internal Public Space)
စာကွညျ့တိုကျ၊ ပွတိုကျ၊ မွို့နယျခနျးမ . . .စသညျ။
ဒါ့အပွငျ . . . မီးရထားဘူတာ၊ လဆေိပျ၊ သဘောင်္ဆိပျ၊ ဘတျဈ ကားမှတျတိုငျ . . .စသညျ့ပို့ဆောငျရေး သဏ်ဍာနျ (Transporation Facilities)
(၃) အဆောကျအအုံပွငျပနှငျ့ အတှငျး အမြားအသုံးပွုနသေော နရောမြား (External & Internal quasi-public space)
ကိုယျပိုငျဖွဈသျောလညျး အမြားပိုငျကဲ့သို့ ဖွဈနသေောနရောမြား၊ တက်ကသိုလျ ပရိဝုဏျ၊ အားကစားကှငျး ၊ စားသောကျဆိုငျ၊ ရုပျရှငျရုံ၊ ကုနျတိုကျကွီး။ Privatized public space လို့လညျး ချေါပါတယျ။
“မွို့ပွဟငျးလငျး” ပွောပွော၊ မွို့ပွ ရငျပွငျဆိုဆို (Urban Space) အကွောငျး ဆကျပွောကွရအောငျ . . .။
ပွငျပဟငျးလငျး (out-door space) ကို Positive နဲ့ Negative Spaceဆိုပွီး အဖိုအမ ခှဲလို့ရပွနျတယျတဲ့။ အဖိုဟငျးလငျးကို တိုငျးထှာလို့ ရတယျတဲ့။ တိကပြွတျသားတဲ့နယျနိမိတျ (define boundary) ရှိတယျတဲ့။ ပိတျနတေဲ့သဘော ဖွဈနိုငျသလို၊ အဆကျအစပျသဘော (enclosed) လညျး ဖွဈနိုငျသတဲ့။ လှတျလှတျပွောရရငျ ရဖွေညျ့ထားတာနဲ့တူတယျတဲ့။ အမာ “hard” Urban Space လို့လညျး ပွောပါတယျ။ “အမဟငျးလငျး” ကတော့ ပုံသဏ်ဍာနျ အတိအကပြွောဖို့ခကျခဲပါသတဲ့ (shapeles) ၊ အပြော့(soft space) ပါ။ ဥယြာဉျပနျးခွံတှရေဲ့ဟငျးလငျးပွငျတှပေါ။
သညျတဈခုမှာတော့ အဖိုဟငျးလငျးပွငျကို ဖနျတီးခွငျး (Creating Positive Space) တှကေို ဆကျပွီးတငျပွလိုကျပါတယျ။ positive urban space မှာ အကွီးအသေး ပုံသဏ်ဍာနျ (size & shape) အမြိုးမြိုးရှိသျောလညျး အခွခေံနှဈမြိုးပဲ ခှဲခွားလို့ရပါတယျ။
လမျးမြားနဲ့ ရငျပွငျမြား (Street & Square)ပါ။ Streets ဆိုတာ ခွုံငုံပွောတာပါ။ squares မှာလညျး plaza, circuse, pizza, place, court . . . စသဖွငျ့။ လမျးမြားဟာ လှုပျလှုပျရှားရှား dynamic space ဖွဈတယျ။ sense of movement ရှိတယျလို့ ဆိုတယျ။ square ကတော့ ငွိမျသကျခွငျး stafic space ပါပဲ။
“လမျးနဲ့ ရငျပွငျ”အတှဲကို ဖှဲ့စညျး စီမံတဲ့နရောမှာ သမားရိုးကနြဲ့ သမားရိုးမဆနျခွငျး (formal & informal) ဆိုပွီး “ကှနျ့” ကွပါသေးတယျ။ formal space နညျးလမျးတှကေတော့ စနဈတကြ လေးထောငျ့စပျစပျဖှဲ့ စညျးထားပွီး အဆောကျအအုံမြားနဲ့ ကာရံထားတဲ့သဘောပါ။ ကွမျးခငျးစီမံမှု (floor space) လုပျထားမယျ။ ပရိဘောဂ (street furniture) ပါမယျ။ informal space နညျးလမျးမှာတော့ အခြိုးမညီအကှကျခြ (asymmetric layout) ကို အခွခေံပါတယျ။ ပိုပွီးပြော့ပြောငျးတဲ့ relaxed chatracter ဖနျတီးပါတယျ။ ပွီးတော့. . . ဗိသုကာအာဝါသ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဖနျတီးပေးတယျ။ (wide variety of surrounding architecture)
လမျးမြားမှာ street cafes, street market . . .စသဖွငျ့ကဖေးဆိုငျ၊ ဈေးဆိုငျလေးတှေ လှလှပပပသာသာယာယာ ဖနျတီးပေးလို့ရပါတယျ။ ဆိုငျကွီး ကနားကွီးတှကေို ထညျထညျဝါဝါ မသှားလိုသူတှအေတှကျပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မွို့ထဲသှားရငျးလာရငျး လမျးလြှောကျရငျ ဈေးဝယျလို့ ရပါမယျ။ မုနျ့လေး အဆာပွစေားလို့ရမယျ။ အပူလေး အအေးလေး သောကျလို့ရပါမယျ။ အခြို့နရောတှမှော ထီးလှလှလေးတှေ အုပျမိုးလို့ပေါ့။ ( ယခု လမျးဘေးဈေးသညျ မိုးနကြေ ထီးမြိုးမဟုတျပါ။) အခြို့နရောမှာ ပနျးလေးတှေ ပှငျ့၊ တခြို့နရောမှာ အပငျလေးတှေ စိမျးမွ၊ တခြို့နရောမှာ ရောငျစုံလမျးကလေးနဲ့၊ တခြို့နရော ရုပျတုလေးနဲ့၊ တခြို့နရော ရပေနျးလေးနဲ့ သာသာယာယာ၊ လှလှပပ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ – အနျောရထာလမျးနဲ့ မဟာဗန်ဓုလလမျးကွား (၄၆ နှငျ့ ၄၈ ကွား) ဆူးလတေဈဝိုကျ၊ ပနျးဆိုးတနျးအောကျလမျး တဈဝိုကျ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့စိတျကူးပါ။ အိပျမကျပါ။ ရနျကုနျမွို့ဟောငျး down town (၆) မွို့နယျရဲ့Urban Space-Public Place တှကေို လကျရှိ အနအေထားထကျ အသုံးတညျ့ဖို့၊ လှပဖို့ လိုအပျမယျထငျပါတယျ။ “အသဈ”တှလေညျး တညျဆောကျတာ တညျဆောကျရမှာ ဖွဈသလို ၊ မွို့ဟောငျးနရောကိုလညျး ထိနျးသိမျးရပါလိမျ့မယျ။ အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးသငျ့တဲ့ နရောမှာမွှငျ့တငျပေးရပါလိမျ့မယျ။
ရနျကုနျမွို့နယျဟာ ကားတှရေပျစရာ နရောမရှိသလို၊ လူတှေ လမျးသှားစရာ တူတူတနျတနျ ပလကျဖောငျး ရှားသှားပါပွီ။ ဘိုကကေို ပွောငျအောငျဖွီးလိမျးပွီး အကြီ င်္လကျရှညျနဲ့ ဘောငျးဘီအရှညျနဲ့၊ ခါးပတျနဲ့၊ ရှူးဖိနပျနဲ့ စတိုငျကကြ လမျးလြှောကျဖို့ဆိုတာ ဆူးလဘေုရားလမျးမှာ . . . ပနျးဆိုးတနျးလမျးမှာ . . .မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ မိုးရှာရငျ အနျောရထာလမျးပျေါမှာ “ ထီးကလေးနဲ့ မနီ” လမျးလြှောကျလို့လုံးဝ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။
အားလုံးကို မဆိုလိုပါဘူး။ လမျးတိုငျး၊ နရောတိုငျးလညျး မဖွဈနိုငျပါဘူး။ လမျးအခြို့ နရောတခြို့မှာ . . .
ဟိုနိုငျငံနဲ့ တူဖို့လညျး မလိုပါဘူး။
သညျ နိုငျငံနဲ့ဆငျဖို့လညျး မလိုပါဘူး။
“ Street & Square ” ခြောခြောမှမှေ့လေ့ေးဖွဈရငျ . . . ကြှနျတျောတို့လညျး ခါးပတျနဲ့ ဖိနပျနဲ့ လမျးလြှောကျလို့ အဆငျပွလောမှာပါ။
ဖကျရှငျကသြညျ့ အဝတျဗီရိုခနျးဖနျတီးခွငျး အပိုငျး (၃)
ဖကျရှငျကသြညျ့ အဝတျဗီရိုခနျးဖနျတီးခွငျး အပိုငျး (၁)